New Life Real Estate - Myanmar Real Estate, Myanmar Real Estate Website, Myanmar Property Portal, Property for sale/rent| ShweProperty
09 43089164, 0973168319,09 788598020, 09 33070123 Website
Sales, Marketing and Leasing, on behalf of both landlords and tenants / purchasers (exclusive and non-exclusive) အဓိက ၀န်ဆောင်မှုပေးသော မြို့နယ်များ
New Life Real Estate ၏ နောက်ဆုံးရ အိမ်ခြံမြေများ
09 43089164, 0973168319
ရောင်းရန် - ပြည်လမ်းသွယ် (၇)မိုင်၊ သလ္လာဝတီလမ်းရှိ လုံးချင်းအိမ်ရောင်းမည်
ဧရိယာ : 3770 sqft
ပြည်လမ်းသွယ် (၇)မိုင်၊ သလ္လာဝတီလမ်းရှိ လုံးချင်းအိမ်ရောင်းမည်
မရမ်းကုန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	14,500 သိန်း
Asking Price : 14,500 သိန်း
ရောင်းရန် - ငွေကြာယံရှိ လုံးချင်းနှစ်ထပ်တိုက်ရောင်းမည်
တောင်ဥက္ကလာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	7,000 သိန်း
ငှားရန် - အောင်ချမ်းသာကွန်ဒို
ငှားရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း သာဓုအိမ်ရာရှိ ပါကေးခင်းထားသော ကွန်ဒို ငှားမည်
သင်္ဃန်းကျွန်း သာဓုအိမ်ရာရှိ ပါကေးခင်းထားသော ကွန်ဒို ငှားမည်
ရန်ကင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	1,200 USD
ငှားရန် - New Life အိမ်ခြံမြေမှ လုံးချင်းအိမ်ငှားမည်
New Life အိမ်ခြံမြေမှ လုံးချင်းအိမ်ငှားမည်
ကမာရွတ် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	30 သိန်း
ငှားရန် - Royal Ma LiKa
ဧရိယာ : 1270 sqft
Royal Ma LiKa
သင်္ဃန်းကျွန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	1,800 USD
ငှားရန် - New Life အိမ်ခြံမြေမှ မရမ်းကုန်းပါရမီရှိ လုံးချင်းအိမ်ငှားမည်
New Life အိမ်ခြံမြေမှ မရမ်းကုန်းပါရမီရှိ လုံးချင်းအိမ်ငှားမည်
မရမ်းကုန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	19 သိန်း
Asking Price : 19 သိန်း
ငှားရန် - New Life အိမ်ခြံမြေမှ Inya Myaing Road. လုံးချင်းအိမ်ငှားမည်
New Life အိမ်ခြံမြေမှ Inya Myaing Road. လုံးချင်းအိမ်ငှားမည်
ဗဟန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	5,500 USD
ငှားရန် - Parami Residence
မရမ်းကုန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	3,500 USD
ငှားရန် - စည်ပင်သာယာလမ်း (ပါရမီ)
ငှားရန် - ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းငှားမည်
ငှားရန် - ရွှေဂုံတိုင်တာဝါ
ဗဟန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	1,500 USD
ငှားရန် - တိုက်သစ်လုံးချင်းအိမ်ငှားမည်
သင်္ဃန်းကျွန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	3,200 USD
ငှားရန် - (52)လမ်းရှိကွန်ဒိုတိုက်ခန်းငှားမည်
ရောင်းရန် - Star City
သံလျင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	1,250 သိန်း
ငှားရန် - မင်းဓမ္မလမ်းရှိလုံးချင်းအိမ်ငှားမည်
မရမ်းကုန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	8,000 USD